#ZumaVote: Inkunzi emidwayidwa uMengameli uJacob Zuma akayindawo | News24
#ZumaVote: Inkunzi emidwayidwa uMengameli uJacob Zuma akayindawo
Durban - Asevote aqeda amalungu ephalamende kanti lokhu kushintsha izinto eziningi ngezombusazwe kuleli.
NgoMsombuluko uSomlomo wePhalemende uBaleka Mbete uveze ukuthi ivoti lokungamethembi uMengameli lizokwenziwa ngokuyimfihlo.
Lokhu kulandela isicela esafakwa ngamaqembu aphikisayo lapho ethi ukuvota ngokuyimfihlo kuzovikela namalungu eqembu elibusayo ukuba bavote ngaphandle kokwesaba kanye nokusatshiswa.
Lolu daba oselunezinyanga ludingidwa ludale olukhulu uqhekeko ikakhulukazi eqenjini eliphikisayo njengoba kukhona amalungu aleli qembu asephumele obala ngokuthi azovota ngonembeza wabo.
Lawa malungu afana noPravin Gordhan owayenguNgqongqoshe wezeziMali kanye noMakhosi Khoza ngabanye bamalungu aleli qembu akuveze ngokusobala ukuthi asekhathele yinkohlakalo eyenzeka kuleli lizwa futhi anxusa namanye amalungu ephalamende ukuba avote ngonembeza azibonakalise ukuthi asekhathele yilokhu okwenzekayo.
Lokhu, kanye nombiko wokulawulwa kombuso ngumndeni wakwa-Gupta kulethe elikhulu ifu elimnyama ebuholini bukaMengameli uJacob Zuma.
OLUNYE UDABA:#SecretBallot: USomlomo wePhalamende uthi akuvotwe ngokuyimfihlo
Lo mbiko waphuma ngesikhathi esibucayi kakhulu kanti selokhu waphuma sekuvele nama-"meyili" okuthiwa angubufakazi bokuthi umndeni wakwaGupta yiwona ngempela olawula izinhlaka ezimbalwa zezikhungo zikahulumeni futhi ulawula nongqongqoshe abathile kuleli.
Okwenza ingcindezi ibe nkulu kakhulu kuMengameli wukuthi sekusondele ukhetho lobuholi obusha kwi-ANC kanti lokhu kudale uqhekeko olukhulu kakhulu njengoba kunomdonsiswano mayelana nokuthi ubani ozohola le nhlangano.
Izinto zimapeketwane ku-ANC ngoba kumaqembuqembu ngaphakathi eqenjini elilodwa kanti nezinhlangano eziyingxenye yomfelandawonye nazo zithi zanele nguMengameli.
Njengoba seliphumile ivoti lasePhalamende elithi uMengameli akayi ndawo, lokhu kubonisa ngokusobala ukuthi mukhulu umsebenzi okumele wenziwe yiqembu elibusayo ukubuyisa isithunzi salo.
Abathi ababuthembi ubuholi bukaMengameli bangu- 177
Abathi bayamethemba uMengameli bangu - 198
Bangu-9 abangazange bavote